Madaxweynaha Jubbaland oo wali ugaarsanaya Kooxda Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynaha Jubbaland oo wali ugaarsanaya Kooxda Farmaajo
Mid ka mid ah saaxiibada aadka ugu dhow Farmaajo, ayaa ku dhibaatoonaya inuu cagaha dhigo Kismaayo, isla-markaama laamaha ammaanka Jubbaland ayaa ugaarsanaya shaqsiyaad isaga matala oo ku sugan Jubbaland.
KISMAAYO, Soomaaliya –Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam, ‘Maddobe’ ayaa halkiisii ka sii wada beegsiga shaqsiyaadka abuuray mushkiladda Jubbaland iyo xasaradaha siyaasadeed ee gobolka Gedo, kuwaas oo uu ugu horreeyo Cabdi Cali Raage, oo saaxiib dhow la ah Farmaajo.
Madoobe, ayaa 8 July 2021, Raage, ka hor istaagay inuu cagaha dhigo Kismaayo, kadib markii uu si dhuumaaleysi ah diyaarad rakaab Muqdisho kaga raacay, si uu qaab dhuumaaleysi ah ugu galo xarunta gobolka Jubbada hoose.
Raage, wuxuu u sharraxan yahay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka Golaha shacabka, kaas oo uu hadda ku fadhiyo Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xiddig oo saaxiib dhow ay yihiin Madaxweynaha Jubbalan Axmed Madoobe.
Sida uu ku daabacay bogga uu ku leeyahay Facebook, laamaha amniga Jubbaland, ayaa xalay xabsiga u taxaabay wakiilkiisaa Kismaayo ee hormuudka u ah kooxda ololihiisa doorashada, waxanaa dhawaan la geeyay garoonka diyaaradaha Kismaayo, si loogu soo masaafuriyo Muqdisho.
“Xalay abaaro 8:00-pm ayaa la igu wargaliyey in xabsiga la dhigay Abdirahman Ahmed Sh Omar oo ah wakiilkayga ololaha doorashadayda ee Magaalada Kismayo, waxaana loo xiray sababo la xiriira ololaha doorashadayda, waxaa hadda la keenay airport-ka si loogu masaafuriyo muqdisho”. Ayuu yiri Raage oo ka mid ah la taliyayaasha Farmaajo.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, ayaa muujinaya in uusan hilmaamin shaqsiyaadkii falkiyay dhibaatada muddada dheer ka aloosneed maamulka Jubbaland, waxaana la rumeysan yahay inuu sidoo kale bartilmaameydsan doono shaqsiyaad uu jiro Wasiir Oomaar.
Hadaba, waa kuma La-taliyihii Farmaajo ee Madoobe geeska galiyay?
Farmaajo ayaa Cabdi Cali Raagge, dhamaadkii bishii July 2020 u magacaabay Lataliyahiisa Arrimaha doorashooyinka iyo Siyaasadda, wuxuuna ka mid yahay la taliyayaasha Farmaajo, ee masuulka ka ahaa xaaladihii kala duwanaa ee Gobolka Gedo.
Bartamihii bishii May, Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ka hor yimid qorshe laga soo maleegay xaafiiiska Farmaajo, kaas oo la doonayay in Raage, loo soo wareejiyo xaafiika Rooble si uu ugala shaqeeyo arrimaha doorashoyinka.
Kismaayo waxuu kasoo cararay markii Axmed Madoobe oo uu u ahaa la-taliye isku khilaafeen arrimo la xiriirka la shaqeynta dowladda Federaalka Soomaaliya, isagoo xiligaas usoo baxsaday Muqdisho.
Wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka sida aan caadiga ahayn loogu naas-nuujiyo canshuurta laga qaado hooyooyinka gobolka Banaadir, wuxuuna mushaar ahaan bishii u qaataa $10,000 [Toban kun oo doollarka Mareykanka].
Waxyaabaha uu ku faano waxaa kamid ah inuuu horay ugasoo shaqeeyay doorashooyinkii dadbanaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkii 2016-kii, islamarkaana la-taliye usoo noqday Axmed Madoobe oo maanta dab iyo baasiin isku yihiin.
Jubbaland waxaa awooddeeda ku loolamaya Mareexaan iyo Ogaadeen oo xukunka haystay 10-kii sano ee lasoo dhaafay, iyagoo aad u degay Kismaayo, islamarkaana u beddelay magaalada meel ay ka dhisan tahay boqortooyo iyagu leeyihiin oo Axmed Madoobe boqor u yahay.